Maxay dadku u doortaan Semalt
Qaar ka mid ah milkiilayaasha websaydhada ayaa qaba in iyadoo la kaashanayo qoraalada gaarka ah, bogaggooda ay gaari doonaan booska ugu sarreeya mashiinka raadinta. Waxay u maleynayaan inay furaha furayaashu kordhin doonaan aragtida websaydhka, sidaas darteedna fasaxa weyn waa dhowyahay. Waa khiyaano aan macno lahayn. Hadday sidan oo kale ahaan lahayd, looma baahna khabiiro khibrad u leh SEO-yada iyo xarumaha tayaynta SEO awood badan. Dhammaanteed way ka sii dhib badan tahay, oo xirfadlayaal la'aanteed, ganacsigaaga internetka ayaa kuu keenaya niyad jab. In kasta oo ay jiraan wax kasta, Semalt wuxuu sii wadaa kor u qaadista SEO-ka ee shabakadaha muddo toban sano ka badan.
Khibradda waaweyni waxay u oggolaaneysaa inay la qabsato howlaha isku-dhafan ee sii kordha. Semalt wuxuu badbaadiyey boqolaal goobood, wuxuu macno ahaan uga soo saaray godkii. Tirakoobyo badan oo macaamiisha ah ayaa xaqiijinaya tan. Ka sokow, waxaad ka eegi kartaa kiisaska bartayada internetka, oo ku soo bandhigaya tusaalooyin run ah oo ku saabsan sida ay wax ku ool u yihiin hababkeenna. Haddii aad go'aansatay inaad ku dhisto ganacsi khatar ah, jidkaaga kaliya ayaa ah Semalt. Kaliya waxaan ka caawin karnaa dadka inay sameeyaan maalgashi sax ah. Barwaaqadaada macnaheedu waa guusheena, marka waxaan ognahay sida guusha loo gaaro.
Maaha wax sir ah in Semalt uu hogaamiye u noqday websaydhka kobcinta SEO. Waxay leedahay koox awood leh oo xirfadlayaal dhab ah oo wax ka qaban kara hawl kasta. Marka hore, waa koox khubaro heer caalami ah oo heer caalami ah SEO ah. Waa inaanu siinaa abaalmarin maamuleyaal u qalma, khabiiro IT-ga ah, suuqleyaal. Shidaalka nidaamkeena Semalt-ka awoodda badan waxaa soo bandhigay qorayaasha kartida leh, naqshadeeyayaasha, iyo falanqeeyayaasha. Waxaa muhiim ah in la ogaado in mid kasta oo ka mid ah xirfadyahannadan uu leeyahay aqoon aad u weyn oo SEO ah.
Si kale haddii loo dhigo, Semalt waxaa loo soo bandhigi karaa hab si habsami ah isugu dubbaridan oo loogu talo galay in lagu wanaajiyo websaydhyada iyada oo loo marayo goynta tikniyoolajiyada SEO-ga ah. Hadda way cadahay sababta Semalt uusan ugu fiicnayn tartamayaasha aaggan. Xaqiiqdii, booska hogaaminta Semalt ayaa si adag loogu xirnaa sannado. Maanta, ku dhawaad qof walba wuu ogyahay in kaliya Semalt dammaanad ka qaadayo guusha dhabta ah ee kobcinta SEO.
Waxaan Ka Ognahay Wax Ku Saabsan SEO
Kordhinta SEO ama Mashiinka Raadinta ayaa badanaa lagu isticmaalaa 'lexicon' dadka isticmaala internetka. Siday noqotay, qof walbana ma fahmin macnaha dhabta ah ee ereyga. Intaa waxaa dheer, dad aad u yar ayaa fahmaya fasiraadiisa. Waxaan rabnaa inaan daah furno oo sharraxno waxa ay tahay. Sidaad si fiican u taqaanid, matoorada raadinta waxay siinayaan dadka isticmaala liistooyinka bogagga iyagoo ka jawaabaya codsiyadooda. Goobaha qaar waxay ku soo baxaan dusha sare ee mashiinka raadinta, halka kuwa kale lagu heli karo oo keliya iyadoo la marayo dhowr bog. Kordhinta raadinta websaydhka waxaa loogu tala galay in laga dhigo boggagaaga inuu galo jagooyinka ugu sareeya mashiinka raadinta. Sidaa darteed, waa amaan in la yiraahdo SEO waa tillaabooyin lagu xoojinayo booska websaydhka natiijooyinka mashiinka raadinta, marka loo eego codsiyada horey loo soo xushay.
Haddii, waqtiyadii la soo dhaafay, Internetka badanaa loo isticmaalay raadinta macluumaadka, maanta xaaladdu aad bey uga duwan tahay. Tirada sii kordheysa ee dadka isticmaala internetka, teknolojiyada cusub, iyo qodobo kale oo badan ayaa Internetka u beddelay aalad suuq geyn xoog leh iyo goob lagu iibiyo. Dhiirrigelinta khadka tooska ah ee internetka waxay faa'iido u yeelan kartaa shirkad kastoo dhagaystayaasheeda imaanaysa ay raadinayaan badeecado ama adeegyo la mid ah internetka. Si kastaba ha noqotee, kumanaan kun ayaa raadinaya badeecadaada maalin kasta laakiin waxay raadiyaan badeecada kuwa kula tartamaya. Tani waa sababta oo ah tartamayaal badan oo xawaare badan ayaa horeyba u galay meelaha ugu fiican natiijooyinka mashiinka raadinta. Waad ka bixi kartaa tartamayaasha sidoo kale. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad ku bilowdid ku-habboonaynta mashiinka raadinta Semalt.
Dabcan, kor u qaadista mashiinka raadinta ayaa ah hab aad wax ku ool u ah oo lagu soo jiito macaamiisha, laakiin waxaa jira hal shuruudood: khabiirada kaliya ayaa fulin kara. Ujeeddada halkan ka jirtana ma aha xaqiiqda ah in kobcinta sinnaanta ay ku kici karto ganaaxyo boggaaga internetka. Mararka qaar tirada dadka soo booqda goobta waa badan yihiin, laakiin tirada iibsadayaashu wali waa kuwo aan laga taxadarin. Si aad u hesho natiijooyinka ugu wanaagsan ee dhiirrigelinta, waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso liiska codsiyada la dalacsiiyay iyo istiraatiijiyadda dhiirrigelinta. Khabiirada Semalt waxay gaari karaan go'aano istiraatiiji ah xaaladaha kala duwan, markaa ha isku dayin inaad adigu kaligaa qorsheysato; taa beddelkeeda, aamin shirkadda aad ku kalsoon tahay.
Xalka Semalt SEO
Kordhinta SEO waxay ku lug leedahay qorshe suuq geyn oo dhijitaal ah oo ay ku jiraan farsamooyinka qaar loogu talagalay kor u qaadida websaydh ama sumad. Farsamooyinka noocan oo kale ah ayaa kuu oggolaanaya inaad aragti badan ka hesho internetka. Semalt had iyo jeer waxay bixisaa xalal istiraatiiji ah oo dhammaystiran oo daboolaya baaxadda ficillada lagama maarmaanka ah ee buuxa. Natiijada ugu dambeysa waxay noqon doontaa koror ku yimid aragtida taraafikada iyo websaydhka. Kuwa ugu waxqabadka badan ayaa ah ololayaasha FullSEO iyo AutoSEO, kuwaas oo dammaanad qaadaya guusha waqti gaaban. Marka hore, waa inaad tixgelisaa dhowr talaabo oo lagu bixiyay ololahan si aad u dooratid mid ku habboon.
Semalt wuxuu magacaabay talaabooyin dhowr ah ololahan, ujeedka kaas oo ah in lagu dhigo boggaaga internetka jagooyinka ugu sareeya mashiinka raadinta. Hadda, waxaad u baahan tahay inaad si fiican wax u fahamto aasaaska aasaasiga ah ee mabaadi'da AutoSEO. Dhammaan heerarka ololaha waxay ka dhacaan isdhaxgalka tooska ah ee macaamiisha ee kooxda Semalt. Tallaabada la bartilmaameedsaday waxay shaki la'aan u horseedi doontaa natiijooyinka la doonayo haddii aad raacdo dhammaan tilmaamaha khubaradeenna ujeeddadeedu tahay horumarinta boggaaga. AutoSEO waxaa ku jira howlaha soo socda:
xulashada ereyada muhiimka ah ee ugu habboon;
sixitaanka qaladka bogga;
sameynta xiriiriyeyaal shabakadaha xiriirka la leh;
casriyeynta kor u qaadista;
Si aad u bilowdo ololaha AutoSEO, waa inaad iska diiwaan gelisaa degelkeena. Dhamaan talaabooyinka dheeri ah waxaa sameyn doona falanqeeyaha bogga. Aad bay u habboon tahay sababta oo ah ka qeybqaadashadaadu waa in lagu helo warbixinnada hadda ka socda goobta. Falanqeeyaha ayaa si buuxda u hubin doona qaab dhismeedka websaydhka iyadoo loo eegayo heerarka SEO. Intaa ka dib, waxaa lagu siin doonaa warbixintii ugu horraysay ee ku saabsan heerka goobta iyo liiska khaladaadka la ogaaday intii lagu jiray falanqaynta. Khaladaadkaani waxay u baahan yihiin in si dhakhso leh loo hagaajiyo si horay loogu socdo. Injineeradayada SEO ayaa waliba dib u eegi doona falanqaynta waxayna dooran doonaan ereyada muhiimka ah ee la xiriira. Natiijada habraaca ayaa la kordhiyay taraafikada shabakadda.
Tallaabada xigta ee ololaha AutoSEO waxay noqon doontaa xulashada iskuxirka internetka oo gelinta ilaha kala duwan ee internetka. Nuxurka si taxaddar leh ayaa loo hubiyaa jiritaanka qiimaha Semantic. Ka sokow, waa inay la mid noqotaa xiriirada loogu talagalay galinta. Hawsha oo dhami waxay ku socotaa kormeer joogto ah maareeyahayaga, markaa wixii hanjabaad ah ee websaydhka waa laga reebayaa. Maareeyuhu sidoo kale wuxuu la socdaa meesha ay ku taal xiriiriyeyaasha mashiinka raadinta oo wuxuu go'aamiyaa ilaa xadka ay la egyihiin kheyraadka ka hor intaadan xirrin xiriirada.
Isticmaalka helitaanka FTP (Protocol Transfer Transfer Protocol) iyo macluumaadka warbixintii hore, khabiirada Semalt waxay sameyaan isbeddelada lagama maarmaanka u ah websaydhka. Isbedeladaan ka dib, kobcinta goobta ayaa bilaabeysa horumar. Ololaha oo dhan, Semalt wuxuu isha ku hayey cusbooneysiinta joogtada ah, wuxuu soo bandhigayaa ereyada muhiimka ah ee loo baahan yahay. Dhamaan ereyada furaha ah waxaa laga hubiyaa inay u hoggaansan yihiin waxa ku jira. Sidaad arki karto, kaqeybgalkaaga howshu waa yar tahay, laakiin waxaad had iyo jeer la socotaa waxkasta oo ka dhaca goobta. Marka la eego qiimaha adeegga, xirmada billaha ah ee 'AutoSEO' waxay ku kici doontaa $ 99.
FullSEO waa kobcinta SEO tayo sare leh, natiijooyinka oo lagu gaaro waqti gaaban. Sidoo kale, dhowr talaabooyin ayaa loo qabtay si kor loogu qaado qiimeynta websaydhka ee mashiinka raadinta. Halkan, kor u qaadista gudaha iyo dibedda waxaa lagu fuliyaa iyada oo la raacayo hagista khabiirka SEO. FullSEO waa kobcinta kobcinta SEO ee bixisa guul aan horay loo arag xagga ganacsiga internetka. Intaa waxaa dheer, ololahan ayaa gacan ka geysan doona dib u soo celinta dhammaan tartamayaashii muddo dheer.
Ololaha FullSEO wuxuu marayaa heerar. Si aad u bilowdo hawsha, waa inaad iska diiwaan gelisaa degelkeena. Falanqaynta qaab dhismeedka websaydhku wuu bilaabmayaa, oo waxaad helaysaa warbixin faahfaahsan. Ku saleysan warbixinta, khabiirka SEO ayaa qeexaya xudunta Semantic. Falanqaynta ayaa sidoo kale muujineysa dhammaan khaladaadka hor istaaga horumarka sii socda. Khaladaadka waa in si dhakhso ah loo saxo, ka dib waa waqtigii go'aaminta ereyada muhiimka ah. Furaha ereyadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan socodka taraafikada. Iyada oo loo marayo marinka FTP, khabiirka ayaa si fudud ugu biirin doona dhammaan isbeddelada loo baahan yahay. Tani waa marxaladda kor u qaadista gudaha ee websaydhka.
Marka xigta, waxay noqonaysaa kor u qaadista dibedda. Marxaladani waxay ku lug leedahay gelinta xiriiriyeyaal ilo dhaqaale. Kheyraadkaani waa inay si adag u muujiyaan nuxurka nuxurkaaga. Websaydhka ayaa wax laga beddeli doonaa isla marka la galiyo xiriirinnadaas, sidaa darteedna khubarada SEO-ga ayaa wajigan aad uga taxadaraya. Semalt wuxuu u shaqeeyaa si wax soo saar leh oo leh goobo badan oo la xaqiijiyay, taasina waa sababta khubaradu ay u yaqaanaan si sax ah meesha ay ka galaan xiriirada loogu talagalay kobcinta guusha. Geedi socodka FullSEO wuxuu kusocdaa kormeer joogto ah ilaa iyo inta laga dhameynayo. Waxaad la socotaa wixii isbeddel ah ee ku yaal bogga. Ka hel warbixinno faahfaahsan kobaca qiimeynta websaydhka. Waqti kasta oo maalinta, waxaad la xiriiri kartaa qofka mas'uul ka ah Semalt oo aad weydiisan kartaa sharaxaadda lagama maarmaanka ah.
Ma jirto sabab looga walwalo haddii kor u qaadista SEO loo joojiyo sabab uun. In kasta oo Google ay ka saari doonto dhammaan xiriirada dib-u-cusboonaysiinta keydka macluumaadka bil gudaheed, qiimeynta ayaa ku sii jiri doonta meel gaar ah. Darajooyinka hoos u dhaca ma noqon doonaan kuwo musiibo ah, maxaa yeelay shirkadda 'FullSEO' waxay shaqadeeda qabatay. Booska qiimeynta ayaa had iyo jeer ka sarrayn doona ka hor inta uusan ololaha bilaabin. Way adag tahay in hore loo sii ogaado qiimaha adeegga: mashruuc kastaa waa mid shaqsiyeed. Qiimaha waxaa sida caadiga ah la magacaabaa ka dib markii khabiir SEO-ga ah uu baaro boggaaga isla markaana gaaro go'aano gaar ah. Sikastaba, kharashyada oo dhan ayaa si buuxda uga bixi doona dakhliga soo gala ololahan.
Falanqaynta by Semalt
Xog ururinta falanqaynta ayaa ah mid ka mid ah qaybaha wax soo saarka websaydhka wax soo saar ee SEO. Semalt ayaa ka sarreysay dhammaan nidaamyada tartanka marka la eego arrintaas. Tusaale waa adeeg baaritaan oo faahfaahsan oo ku saabsan bogga - Falanqaynta. Hantidhawrka ayaa waxaa raacaya abuuritaanka warbixin faahfaahsan, oo ay kujiraan falanqaynta goobaha tartanku ka socdo. Erayada ugu habboon ee habboon ayaa la xushaa, waxaana la sameeyay silsilado noocyo ah, marka loo eego qiimeyntooda. Iyada oo ku saleysan ereyada muhiimka ah, aasaaska Semantic-ga ayaa la wanaajiyaa, kaas oo loo isticmaali doono in lagu horumariyo boggaaga mustaqbalka. Waa tan liiska himilooyinka Falanqaynta:
ereyga talo soo jeedinta;
la socodka astaanta;
falanqaynta booska keywords;
Falanqaynta ayaa dhaqangeleysa isla marka aad iska qorto websaydhka. Xog ururinta ayaa si otomaatig ah loo qabtaa. Dhameystirka aruurinta falanqaynta, waxaa lagu siin doonaa warbixin ku saabsan booska websaydhka mashiinka raadinta. Ka sokow, bogagga tartamayaasha ayaa sidoo kale la falanqeeyay, sidoo kale, waxaad yeelan doontaa macluumaad run ah oo ku saabsan xaaladda hadda jirta ee dhammaan bogagga saddexaad ee shabakadda. Waa faa iido weyn. Marxaladda qaab-dhismeedka websaydhka, dhammaan heerarka SEO waa la tixgelin doonaa, sidaa darteed, qaabeynta websaydhada waxaa loo habeyn doonaa si ay u sii wanaajiso.
Lahaanshaha koonto ansax ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku darto tiro kasta oo bogag ah golahaaga khaaska ah. Websaydh kasta oo lagu daro sidoo kale waa la falanqayn doonaa. Warbixintu waxay soo bandhigi doontaa dhammaan natiijooyinka falanqaynta; way cadahay waxa ereyada furaha ah ee aad ubaahantahay inaad isticmaasho. Nidaamku wuxuu hubin doonaa in ereyada muhiimka ahi ay u dhigmaan macnaha waxa ku jira. Isku-darka tallaabooyinkan ayaa shaki la'aan u horseedi doona koror deg deg ah imaanshaha websaydhka. Jidka, waxaad ku dari kartaa ama tirtiri kartaa ereyada kale ee furaha ah dookhaaga.
Faa'iidada aad u leedahay xulashada falanqaynta ayaa ah in websaydhka la falanqeeyo 24ka saacadood maalintii. Horumarkeeda si taxaddar leh ayaa loo raad raacaa xitaa markaad nasanayso oo aadan ganacsi sameyn. Macluumaadka ku saabsan tartamayaashaada ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dhaqaaqdo tallaabada saxda ah wakhti sax ah, adigoo had iyo jeer jooga jagooyinka ugu sarreeya. Xitaa ma aha inaad ka fakartid waxa u wanaagsan falalka, Falanqeeyayaasha ayaa kuu sheegi doona waxa saxda ah ee ay tahay inaad sameyso. Dadbadan ayaa adeegsada Codsiyada Barnaamijka Barnaamijyada (API Programming Interface) (API), waa mid aad u haboon maxaa yeelay xogtu si otomaatig ah ayey u wada shaqeyneysaa, taasoo kuu ogolaaneysa inaad la socotid wixii cusboonaysiinta ah. Falanqaynta waxay bixisaa seddex xirmo oo jumlado ah; mid kastaaba wuxuu leeyahay kharashkiisa. Waxay kala yihiin:
HEERARKA - $ 69 bishii ($ 300 erey-fureyaal, 3 mashruuc, taariikhda booska 3 bilood);
PROFESSIONAL - $ 99 bishii (1 000 fureyaal, 10 mashruuc, taariikhda hal sano oo taariikhda ah);
PREMIUM - $ 249 bishii (10 000 fureyaal, Mashaariic aan xadidneyn).
Semalt sidoo kale waxay soo jeedinaysaa adeegyada horumarinta bogga. Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo goob ganacsi, oo ay ku jiraan qaabeynta qeybaha ay ka kooban tahay. Waxay si toos ah u tahay - naqshadeyn, is dhexgalka barnaamijyada dhinac saddexaad, iyo Nidaamka Maareynta Maaddada. Bixinta dheeraadka ah waa modulesyo elektaroonig ah oo gaar ah iyo APIs.
Soosaarashada Wax Soo Saarka ee Fiidiyaha
Soosaarista mashaariicaha internetka ee ganacsiga waaweyn ayaa had iyo jeer ku lug leh qorshayaal suuq geyn. Semalt wuxuu filayey duruufahaas, isagoo soo jeedinaya abuuritaanka fiidiyow qaas ah. Fiidiyowgu wuxuu leeyahay dabeecad xayeysiin ah, taasoo ka tarjumeysa dhammaan faa'iidooyinka shirkadda cusub. Barnaamijka "Soo Saarida Fiidiyowga Xayeysiinta ah" ayaa loo isticmaali karaa laba siyaabood: qaab shaxeed ahaan iyo doorbidid shaqsiyeed. Nooc kasta, qiimaha ayaa kala duwan. Sida laga soo xigtay khibrada khubarada, 50% guusha ganacsiga ganacsiga internetka waxay kuxirantahay wakiilka saxda ah ee shirkadda. Fiidiyowena ayaa sare u qaadista boqolkiiba guusha aad uga badan.
Markaa waxaan dulmar kooban ka sameynay shirkadda Semalt, laakiin rumeyso, waa uun baraf baraf ah marka loo eego dhammaan faa'iidooyinka ay shirkaddu keeni karto. Kordhinta websaydhka SEO-ga ayaa aad uga badan xulashada ereyga keyword. Waa saynis dhan oo loo heli karo oo keliya xirfadlayaasha. Akhri sheekooyinkayaga; waad garan doontaa in kuwii isku dayay inay wax yeelaan Semalt la'aantood ay na weydiisteen gargaar. Oo waanu badbaadin jirnay. Waqti ha luminin; bedelkii, bilow inaad ku sii kordho Semalt, taajir ka dhig, oo ku farax. Waan ku sugeynaa!